Dood maanta ka dhacday baarlamaanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dood maanta ka dhacday baarlamaanka
La daabacay fredag 3 februari 2012 kl 17.04
Sawirka Baarlamaanka Dalkan Iswiidhan
Dalab ay maanta soo jeediiyeen xisbiga sooshiyaaldimuquraadigu ayaa hoorseeday maanta in looga hadlo baarlamaanka dalkan Iswiidhan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee lagu maal galiyo lacgta dawliga ee ka soo baxda caymiska.
Jennie Nilsson, oo matalaysay xisbiga (S) ayaa dawlada ku dhaleecaysay jilicsanan in aanay wax ka qabanayn dhibaatooyinka soo shaac baxay mudooyinkii ugu dambeeyey, kuwaaso la xidhiidha, sida shirkado badani lacagta macaashka ee ay helaan dalka dibada uga saaraan, tusaale ahaan shirkadaha xanaanooyinka waayeelka, lacagta ay helaana aan cashuur ka bixin oo ay dalka diba uga saaraan si aan looga cashuurin.
Wasiirka dhaqaalaha ee dalkan Iswiidhan Anders Borg ayaa dhaleecadaas korka ka saaray xisbiga mucaaridka ah ee sooshiyaaldimuquraadiga.
Wasiirkan ayaa sheegay in mudadii ay xisbiga (S) hogaanka hayeen ay u sahleen shirkadahan oo ay sharciga badaleen, tussalana u soo qaatay shirkada Carema oo dhaleeco badani uga timid sida qayral masuulka ah ee ay ula dhaqmeen waayeelka ku jira xarumaha xanaanada ee ay leeyiihiin.
Wasiirka dhaqaalaha ayaa raaciyey in bilaha soo socda ay wax ka qaban doonaan shirkadaha lacagta ka saara wadanka.
Per Strömberg,oo ah profasoor ku takhasuusay cilmiga dhaqaalaha kana hawl gala jaamacada dhaqaalaha ee Stockholm ayaa sheegay in siyaasiyiintu ay jilicsanaayeen markii ay go'aankan u hir galiyeen shirkadahaas.